Madaxweyne Al-Bashiir oo Koonfur Afrika ka tagay xilli uu jirey amar maxkamadeed – Radio Muqdisho
Wasiirka warfaafinta dalka Suudaan Axmed Bilaal Cismaan ayaa xaqiijiyay in uu madaxweyne Al-Bashiir uu ka soo duuley dalka Koonfur Afrika maanta oo Isniin ah isla markaana uu ku soo wajahan yahay dalkiisa,isagoo iska dhagatirey amarka maxkamadda sare ee dalka South Afrika taas oo Axadii soo saartay in madaxwenuhu uusan dalka ka dhofi ka rin ilaa amar dambe.
” Haa, wuu ka soo tagay” yuu Al Jazeera, u sheegay wasiirka warfaafinta isagoo intaa raaciyay in dowladda Koonfur Afrika ay kal hore sheegtay in aysan xiri doonin madaxweynaha markii uu ka soo qeybgalayay shir madaxeedka midowga Afrika.
” Madaxweyne Bashiir kuma ahan maxbuus gudaha dalkiisa”ayuu key daray wasiirka warfaafinta Axmed Bilaal Cismaan,waxaana uu madaxweynuhu Khartuum ka digi doonaa saacadda 6:30pm ee waqtiga dalka Suudaan.
Warbaahinta dalka Koonfur Afrika ayaa soo warisay in madaxweynaha dalka Suudaan maanta oo Isniin ah ay diyaarad ka soo qaaday saldhig militiri oo key yaala meel ka baxsan magaalada Pretoria isla South Afrika isla markaana loo soo duuliyay dalkiisa.
Xarunta Hanuuninta iyo Daaweynta kutalax-tagga Diinta oo laga furey Muqdisho